घर बसीबसी युट्युबबाटै बन्नुहोस् मालामाल, अपनाउनुस् यी तरिका ! रोचक जानकारी !! – Khabar PatrikaNp
युट्युब मनोरञ्जनको साधनमात्र होइन कमाइको माध्यम पनि हो। तपाइँ युट्युबमा च्यानल बनाएर पैसा कमाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ युट्युबर बनेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाइँले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नुपर्छ। युट्युबबाट कमाइ गर्नका लागि निम्न कुरामा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ :–
Prevकोरोना संक्रमणको दर बढेपछि विद्यालय एक साताका लागि बन्द !
Nextविहान उठ्ने वित्तिकै यस्ता कुराहरू देख्नुभयो भने तपाईको दिन शुभहुनेछ
नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर साढे तीन लाखमा